Mampiroborobo Indray Ny Fahasamihafana Ara-Kolontsaina ao Tombouctou · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2014 3:28 GMT
Vakio amin'ny teny English, polski, Català, Español, Ελληνικά, বাংলা, عربي, Français
Mpandray anjara tamin'ny atrikasa tao Tombouctou, Mali. Sary avy amin'ny mpanoratra.
Efa ela ny faritr'i Tombouctou ao Mali no fihaonan-dalana ara-barotra sy ara-kolontsaina. Mpifanolo-bodirindrina manamorona ny Renirano Niger ny Songhaï, Peul, Sorko, Touareg, Bellah, Kunta ary ny Bérabich. Niharan'ny teritery ny fifandraisana teo amin'ireo tanàna ireo hatramin'ny nisian'ny ady an-trano 2012-2013 tao Mali izay niteraka ady ara-pivavahana sy ara-poko teo amin'ireo vitsy an'isa ao amin'ny firenena. Eo am-panatontosana asa ankehitriny ireo fikambanana tsy miankina maromaro ao an-toerana, manangana tetikasa hanampiana hanavaozana indray ny firaisankina ara-tsosialy sy hametrahana indray ny filaminana ao Mali. Tantara amin'iray amin'ireo tetikasa ireo ity, Living Together (“Miara-monina”), sy ny ezak'izy ireo ao Tombouctou.
Fikambanana famakiam-boky notontosain'ny PAT-MALI (Fandaharana Hanohanana Ny Tetezamita ao Mali) ny Live Together, izay mampiroborobo ny kolontsaim-pandeferana sy ny fahalalahana ao amin'ireo sekoly ambaratonga faharoa fototra ao Tombouctou. Tamin'ny fiafaran'ny volana Novambra, namory mpampianatra 32 avy amin'ny taranjam-pianarana samihafa mba handray anjara amin'ny atrikasa fampiofanana mikasika ny fomba hametrahana fikambanana famakiam-boky any amin'ireo sekoly ambaratonga faharoa ny Living Together. Manantena hahazo eReaders 320 hoan'ny mpampianatra sy ny mpikamban'ny famakiam-boky ny tetikasa.
Sary avy amin'ny mpanoratra ireto sary ireto, ahitana sary tamin'iray tamin'ireo atrikasa nofariparitana eo ambony.
Mpandrindra ny atrikasa momba ny fandeferana tao Tombouctou.
Nilaina tamin'ity tetikasa ity ny fotoana sy ny ezaka goavana. Teo amin'ny e-boky 4000 teo no notrohana isaky ny e-reader nomena.
Atrikasa am-panatontosana miaraka amin'ireo mpampianatra.
Zineb Benalla no lehiben'ny ekipa amin'ny ankamaroan'ireo fampiofanana atrikasa aoTombouctou. Mpiara-mpikaroka ao amin'ny Ivon-toerana Arabo momba ny Fikarohana Siantifika sy ny Siansa Mahaolona ao Rabat, Maraoka izy.
Mpandray anjara iray mizara ny traikefany amin'ireo mpikambana hafa amin'ny tetikasa
Faly ireo mpampianatra nahazo eReaders, indrindra taorian'ny fandravan'ny l-Qaeda ao Maghreb Islamika ny tranomboky rehetra ao an-tanàna teo amin'ny Aprily 2012 sy Janoary 2013. (Nanampy nanaisotra ny Al-Qaïda tao amin'ny faritra ny tafika Frantsay.)
Mpandray anjara nandritra ny atrikasa hoan'ny mpampianatra tao Timbuktu, Mali.
Mety hitarika fanovana mahaliana amin'ny fampianarana ao an-toerana ny fampiasana eReaders, mety hampitsahatra ny “penina mena” malazan'ny mpampianatra, fomba fanoratana lahatsoratra amin'ny tsikera sy fanitsiana. Miaraka amin'ny eReaders, miandry ireo mpampianatra mba ho “mpandamina” sy “mpitarika ara-poto-kevitra” kokoa ny sasany, ary antenaina hampiroborobo adihevitra maro eo amin'ireo mpianatra.
Manazava ny tetikasa “Living Together” tao Mali.
eReaders nampahafantarina nandritra ny atrikasa.
Zineb Benalla mitarika ny atrikasa.
Noho ny harena ara-kolontsaina sy ny tsindrin'ny fitondrana niaretana hatramin'ny taona 2012-2013, dia azo natao ho fanadiovam-pahatsiarovana ho an'ny mponina maro ireo atrikasa ireo, izay mbola miaina ny takaitra navelan'i al-Qaeda i Tombouctou ankehitriny.